Izinselelo amakhamera we-panor an Sensor adinga ukubhekana nazo
Amakhamera we-Multi-Sensor Panoramic ayisigaba sekhamera ekhula ngokushesha kakhulu muva nje. Isilinganiso sokukhula sonyaka okubikezelwe sonyaka sango-180- naku-360-degree C ...
Amakhamera we-Multi-Sensor Panoramic ayisigaba sekhamera ekhula ngokushesha kakhulu muva nje. Le khasiIzinga lokukhula konyaka elihlanganisiwe lamakhamera we-180- nama-360-degree for 2014 kuya ku-2019cishe ama-30%. Lokhu kuseduze kwezibalo ezinikezwe amakhamera we-IP ama-dome IP. LeliIzinga lokukhula ngokushesha libonisa ukuthi kusekusezingeni eliphezulu emakethe yalezi zixazululo.
Kodwa-ke, zonke izinzuzo ezingenza amakhamera la nazo ziza nezinkulumo zazo ezithile zezidingo ezingase zibe yizinselelo noma ubunzima kuhlelo lwazo. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi abafaki nababuthayo bahlole izinzuzo ezibhekene nezinkinga ezingaba khona.
I-bandwidth kanye nezinkinga zokugcina
Abasebenzisi bafuna ukuthumela amakhamera amaningi kunethiwekhi yabo futhi badinga ukunciphisa izindleko zokugcina kanye ne-bandwidth.Storage bangenza ama-30 kuye kwangama-50% wezindleko zezombiso zephrojekthi yevidiyo ngokwazo noma amalayisense e-VMS System.
Amandla wabasebenzisi okusebenzisa ukusakazwa kwekhamera okuhlukile ngezinhloso ezihlukile njengokulungiswa okuphansi kodonga lwevidiyo noma lapho kusakazwa kubasebenzisi abaningi. Ngakolunye uhlangothi, ukuqoshwa kwesinqumo esiphezulu kungenzeka ngesikhathi semicimbi ethile ngokususelwa kwizifanekiso zekhamera ezenzelwe umcimbi.
Ukukala izinzuzo nokubi
Amakhamera we-panoramic awanikeza izinzuzo eziningi, kepha akuzona ukuphela kwesisombululo esitholakala emakethe. Yize bekwazi ukuthuthukisa ukuqwashisa ngesimo, banemikhawulo maqondana nokusondelana. Abasebenzisi bayakhuthazwa ukuthi bahlole amakhamera ngaphambi kokuthi bathenge ukuze baqiniseke ukuthi amakhamera angahlangabezana nezidingo zawo.
PHAMBI I-Global Electronic Eye akulona iphupho
Ikhamera ye-Multi-Sensor Panoramic iletha izinzuzo eziningi zokubhekwa OLANDELAYO